Android 6.0.1 marshmallow, munguva pfupi iri kuuya kune chinyorwa 5 padhuze newe!
Kuru Nhau & Ongororo Android 6.0.1 Marshmallow, munguva pfupi iri kuuya kuCherechedzo 5 padyo newe!
Mazuva mashoma apfuura, Samsung yakazotanga kusundira yayo Android 6.0.1 Marshmallow kugadzirisa kuvhura Galaxy S6, S6 kumucheto, uye S6 kumucheto + zvishandiso. Nhasi, tinodzidza kuti Cherechedzo vashanu varidzi vatanga kutora chigamba futi.
Iyo yekuvandudza ichiri mumatanho ayo evacheche uye inonzi inowanikwa muCambodia, kunyanya kuburikidza neSamsung & apos; s Smart switchch PC suite. Kana iwe uchinzwa kusashivirira uye uine Chiziviso 5 N920C, unogona kubata iyo firmware kubva kuSamMobile & apos; s peji (rakabatanidzwa pazasi) uye riise naro pamurume.
Android 6 Marshmallow inounza kuurayiwa kwezvinhu zvitsva, zvinonyanya kuzivikanwa zvizvarwa zveminwe scanner rutsigiro, Maitiro efashoni , granular app mvumo , uye Google Now paTap . Samsung & apos; s yakagadziridzwa TouchWiz ichauyawo neakavandudzwa Internet browser ine integrated ad blocking.
Mukururamisira kose, Galaxy S6 uye Cherechedzo vashanu varidzi havana & apos; havana zvakawanda zvekunakidzwa nazvo - TouchWiz yatove neinotsigisa zvigunwe, izvo zviri pachena kuti zvinoshanda chaizvo, uye Samsung & apos; s Smart maneja app iguru pakuvharidzira bhatiri-rinodhonza maapplication kumashure (chimwe chinhu icho Android & apos; s itsva Doze mode inofanirwa kuita). Granular app mvumo (iyo ficha yauchazokwanisa kupa uye kubvisa mamwe mvumo mune kesi-ne-kesi hwaro), uye Google Zvino paTap (mamiriro ekutsvaga, ayo anotendera iwe kuti uwane ruzivo nezve chero zvaunazvo pachiratidziri chako. nekungobata bhatani repamba), zvisinei, zvitsva kuSammyverse uye zvinowedzera mweya wekufema.
Maererano ne Samsung & apos; s yekugadzirisa purogiramu , pane mamwe mana marongedzero anoda kuwana Marshmallow pamberi pekupera kweQ1 2016. Iyi ndiyo Galaxy S5, S5 Neo, Cherechedzo 4, uye Cherekedza Edge. Varidzi vemidziyo iyi vangangodaro vanowedzera kufara pamusoro pekuvandudzwa kuri kuuya, nekuti zvinoita sekunge hazvingounze chete maGoogle & apos; maficha, asi zvakare gadza iyo nyowani uye yakagadziridzwa TouchWiz interface pamaoko avo. Kana ukarasikirwa nayo - Samsung yakarerutsa chimiro chayo zvishoma muna 2015, ichigadzira iyo Galaxy S6, S6 kumucheto, S6 kumucheto +, uye Cherechedzo zvishanu snappier zvishandiso kupfuura isu & apos; tave kutarisira kubva kuSammy & apos; s mureza. Tinofanira kutaura, isu tinoshuvira chaizvo kuziva kana iwo iwo maratidziro achizobvisa lag paCherechedzo 4, Cherekedza Edge, uye Galaxy S5. Kugara wakatarwa uye kumucheto kwezvigaro zvedu!
SamMobile firmware peji (N920C)
Galaxy Note 5 inomhanya Android 6.0.1 Marshmallow
mafoni matsva 2016 pa & t
Amazon Echo Dot Ongororo (Chizvarwa Chechitatu)
Apple Tarisa SE vs Apple Watch Series 3
Samsung Galaxy S8 + vs Galaxy S7 kumucheto: Iyo hombe-skrini sarudzo inowedzera kukura
Heano maitiro ekugonesa Adobe Flash rutsigiro mu Android 5.0 Lollipop
T-Mobile & apos; s itsva BOGO dhizaini ndeye smartwatch uye mahwendefa edata piritsi
Yakanakisa girazi screen inodzivirira ye iPhone X
Gadzira yako Samsung Galaxy S4 kurira zvirinani uchishandisa Adapt Sound